देशद्रोहि सिके राउतलाई आजिवन जन्म कैद?? यो खुसीको खबरलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरौं सबैलाई जानकारी गरौं - Silo Sangalo
Homeराजनीतिदेशद्रोहि सिके राउतलाई आजिवन जन्म कैद?? यो खुसीको खबरलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरौं सबैलाई जानकारी गरौं
October 9, 2018 राजनीति Comments Off on देशद्रोहि सिके राउतलाई आजिवन जन्म कैद?? यो खुसीको खबरलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरौं सबैलाई जानकारी गरौं
श्रीमान सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यु
नेपाल सरकारको कार्यलय,काठमाडौ
बिषय:- जन्मकैद तथा मृत्युदण्डको फैसला गरियोस
उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल अधिराज्यको संविधान अनुसार नेपाल भित्र वा बाहिर रहेर यो सुन्दर देशको बारे अनेक नकारात्मक सन्देश फैलाउदै देश टुक्राटुक्रा बनाउछु भन्ने देशद्रोहिलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरेको सुन्न पाउँदा धेरै खुसी लाग्यो ।। हाम्रा पुर्खाहरुले अत्यन्तै नाजुक अवश्थाबाट सृजना गरि बनाइदिएको यो देशलाई टुक्राउछु भन्ने कुनै माईकलालमा अधिकार छैन। दुई तिहाई बहुमत बाट बनेको सरकारसँग हामी जनताको ठूलो आशा भरोसा रहेको छ । त्यसैले हामी जनताको कुनै पनि आशा भरोसालाई नटुक्राई यो देशको शिर उच्चो बनाउने काम सधै यो सरकारले गरोस। साथै सिके राउत जस्ता विखण्डनकारीलाई सदाको लागि जेलको चिसो भुईमा सेकिराख्नुको विकल्प छैन । जय होस ओलि सरकारको सिके राउत जस्ता देश द्रोहीलाई आजिवन जेल सजाय होस र अन्त्यमा महेन्द्रनगरकि चेली निर्मला पन्तको निर्मम बलात्कार पछि हत्या गर्ने पिसाचलाई पनि मिल्छ भने फाँसी को सजाय होस सरकार ।। यदि यो सम्भव नभए बिच सडकमा तेर्साएर लिंग काटी नुन खुर्सानी दलियोस ताकी अबका दिनमा यस्ता जघन्य अपराधको निर्मुल होस। ७४/७५ दिन बितिसक्दा पनि किन हत्यारा पत्ता लगाउन नेपाल सरकार चुक्यो कि यो अपराधसँग निकै ठूलो माछा जोडिएकोले कारबाही गर्न सरकारको खुट्टा काम्दै छ? जनता जान्न चाहान्छन ।।
गौरबाट पक्राउ परेका डा सिके राउतलाई राज्य विरुद्धको अपराधको मुद्दा लगाइएको छ । जिल्ला प्रहरी गौरले राउतलाई राज्य विरुद्धको अपराधको मुद्दा चलाएको हो । राउतलाई सोमबार प्रहरीले अदालत पेश गरी अनुसन्धानका लागि ४ दिनको म्याद लिएको छ । देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिएर भूमिगत भएका उनलाई रौतहटको गौरबाट पक्राउ गरिएको थियो ।
राउत केही दिनअघि स्वतन्त्र मधेशको नारा दिँदै प्रहरी अगाडि नै भाषण गरेर भूमिगत भएको प्रहरीको भनाई छ । डा. सिकेसँगै उनका दुई सहयोगी रामेश्वर राय यादव र सञ्जय स्वराज पनि पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले देश टुक्र्याउने अभिव्यक्ति दिँदै नारा लगाएर हिँडेपछि सिकेलाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ । अदालतको तारेखमा आएका राउतले अदातलबाट निस्केपछि देश टुक्र्याएने अभिव्यक्ति दिएको प्रहरीको भनाई छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा रौतहटका डीएसपी महेन्द्रप्रसाद मरासयनीका अनुसार सिकेविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेकाले उनी त्यही मुद्दाको तारेखमा अदालतमा उपस्थित भएका थिए ।
– dailygorkhali.com bata
साथीकी श्रीमतीसँग लिप्त भैरहेको बेला छोरी बिउँझिएपछि घट्यो डर लाग्दो घटना !